Amacandelo eSense eSense kuBantu
Izitho zengqondo - amehlo, iindlebe, ulwimi, ulusu kunye nempumlo - zinceda ukukhusela umzimba. Amalungu omzimba womntu aqukethe ii-receptors ezihambisa ulwazi nge-sensory neurons kwiindawo ezifanelekileyo ngaphakathi kwenkqubo yeemvakalelo.
Ilungu ngalinye lengqondo linee-receptors ezahlukeneyo.
Ii-receptors ngokubanzi Zifumaneka kuwo wonke umzimba kuba zikhona kulusu, kumalungu e-visceral (intsingiselo ebonakalayo kwisisu esiswini), izihlunu kunye namalungu.
Ii-receptors ezikhethekileyo zibandakanya ii-chemoreceptors (ii-receptors zamachiza) ezifumaneka emlonyeni nasempumlweni, iifotoreceptor (izamkeli ezikhanyayo) ezifumaneka emehlweni, kunye nezixhobo ezifunyanwa ezindlebeni.
Oooh, elo phunga: Olfaction
Iiseli ezi-Olfactory zilayini ephezulu kwempumlo yakho. Kwelinye icala, iiseli ezino-olfactory zine-cilia-ezinjengezinwele ezinamathelisiweyo-loo projekthi kwisisu sempumlo. Kwelinye icala leseli, kukho imicu yemithambo-luvo edlulayo, edlula kwithambo le-ethmoid nakwibhalbhu evuthisayo. I-bulb ye-olfactory iqhotyoshelwe ngqo kwi-cerebral cortex yengqondo yakho.
Njengokuba uphefumla, nantoni na esemoyeni oyingenisayo ingena kumngxuma wakho wempumlo: i-hydrogen, ioksijini, initrogen, uthuli, umungu, imichiza. Awunuki umoya okanye uthuli okanye umungu, kodwa unokunuka imichiza. Iiseli ze-olfactory zi-chemoreceptors, oko kuthetha ukuba iiseli ze-olfactory zine-protein receptors ezinokubona umahluko ocacileyo kwiikhemikhali.
Iikhemikhali zibophelela kwi-cilia, ethi ivelise intshukumo yentliziyo eqhutywa kwiseli ye-olfactory, iye kwi-olfactory nerve fiber, ukuya kwi-bulb ye-olfactory nakwingqondo yakho. Ingqondo yakho imisela into oyivumba. Ukuba ujoja into ongazange wayifumana ngaphambili, kufuneka usebenzise enye ingqiqo, enjengokunambitha okanye ukubona, ukwenza uphawu kwimemori yengqondo yakho.
Mmm, mmm, kulungile: Ngcamlani
Iimvakalelo zokujoja kunye nokunambitha zisebenza ngokusondeleyo kunye. Ukuba awunakuva into, ngekhe uyingcamle. Ngcamla amahlumelo elulwimini lwakho anee-chemoreceptors ezisebenza ngendlela efanayo ne-chemoreceptors kwimpumlo yempumlo. Nangona kunjalo, ii-chemoreceptors ezimpumlweni ziya kufumanisa naluphi na uhlobo lwevumba, ngelixa zine iintlobo ezahlukeneyo zokungcamla, kwaye nganye ifumana iintlobo ezahlukeneyo zokungcamla: iswiti, muncu, krakra, kwaye ityuwa.
Ukuqonda gwenxa okuqhelekileyo kukuba amaqhuma amancinci kulwimi lwakho ziincasa zokungcamla. Njengazo zonke izinto ezingalunganga, olu luvo aluchanekanga, nalo. Amagqabantshintshi aselulwimini lwakho abizwa ngokuba yipapillae, kwaye incasa yesidima ilala kanye kwimijelo phakathi kwepapilla nganye.
kukangaphi ukuthatha advil
Ukutya kunemichiza, kwaye xa ufaka into emlonyeni, incasa yolwimi lwakho inokufumanisa ukuba yeyiphi na imichiza oyityayo. I-bud nganye yencasa ine-pore kwelinye icala kunye ne-microvilli ekhutshiweyo kwipore, kunye nemicu yemithambo yoluvo eqhotyoshelwe kwelinye icala. Iikhemikhali ezivela kukutya zibopha kwi-microvilli, zivelise intshukumisa yentliziyo eqhutywa yimithambo yoluvo kwaye ekugqibeleni uye kwingqondo.
iziphumo ebezingalindelekanga ze-trimethoprim sulfa
Ngoku yiva oku: Isandi
Indlebe ayisiyi-organ yokuva kuphela, kodwa ikwanoxanduva lokugcina ulungelelwaniso- okanye ulungelelwaniso. Ukugcina ulingano, indlebe kufuneka ibone ukuhamba. Ukuva, indlebe kufuneka iphendule kukhuthazo lomatshini ngamaza esandi.
Indlebe yangaphandle luvulo lwangaphandle kumsele wendlebe. Amaza esandi ayavalelwa kumjelo wendlebe uye kwindlebe ephakathi. I-eardrum iseta ubuchwephesha bentshukumo:
Xa isandi somsindo sibetha i-eardrum, i-eardrum ihambisa amathambo amancinci-i-malleus, incus, kunye ne-stapes-ezihamba emva koko.
Le ntshukumo ithathwa ngoomatshini bokubamba kwindlebe yangaphakathi, ekhoyo kwiiseli zeenwele eziqukethe i-cilia phakathi kokuphela kwemijelo enesangqa kunye neveranda.
Xa i-cilia ishukuma, iiseli zenza impembelelo ethunyelwa nge-cochlea ukuya kwi-8 ye-cranial nerve, ethwala impembelelo kwingqondo.
Ingqondo emva koko iguqulela ulwazi njengesandi esithile.
Umkhuhlane ngaphakathi kwemijelo yesangqa yendlebe yangaphakathi ihamba, kwaye intshukumo leyo ekugqibeleni iyafunyanwa yi-cilia. Xa i-fluid ingayeki ukuhamba, unokuhlakulela ukugula kokuhamba. I-cilia idlulisela iimpembelelo kwingqondo malunga nokuhamba okujikelezayo kunye nokujikeleza, kunye nokuhamba ngeenqwelomoya ezithe nkqo nezithe tye, ezinceda umzimba wakho ugcine ulungelelwano.
Ukubona kukukholelwa: Ukubona
Xa ujonga iliso, i iris yinxalenye enemibala. Iris ngokwenyani sisihlunu esinombala esilawula ubungakanani be umfundi , edibanisa ukuvumela ukukhanya okungaphezulu kwiso okanye izivumelwano zokuvumela ukukhanya okuncinci kwiso. Iris kunye nomfundi zigutyungelwe yi yekona .
Emva komfundi ligumbi elingaphandle. Emva kwegumbi elingaphandle yi ilensi . Umzimba we-ciliary uqukethe umsipha omncinci oqhagamshela kwilensi kunye ne-iris. Inkqubo ye- umsipha we-ciliary utshintsha ubume belensi ukulungelelanisa umbono okude okanye okufuphi. Iilensi ziyancipha ukubona kude, kwaye ijikeleze umbono osondeleyo. Inkqubo yokutshintsha imilo yelensi ibizwa ngokuba indawo yokuhlala . Abantu baphulukana nobuchule bendawo yokuhlala njengoko bekhula, nto leyo ibangela isidingo seglasi.
Emva kwelensi yeliso yile umzimba we-vitreous , ezele zizinto ezinomzimba wejelatin ezibizwa ngokuba zii vitreous humor. Le nto inika imilo kwibhola yamehlo kwaye idlulisa ukukhanya kumqolo wamehlo, apho Iretina Ubuxoki. Iretina iqulethe hmanga , efumanisa ukukhanya.
Zimbini iintlobo zeenzwa ezibona ukukhanya:
Iintonga ukubona intshukumo. Iirandi zisebenza nzima ekukhanyeni okuphantsi.
ithatha ixesha elingakanani i-60 mg vyvanse
Iicones fumana iinkcukacha ezintle kunye nombala. Iicones zisebenza ngokukhanya okuqaqambileyo. Zintathu iindidi zeekhoni: enye ibhahlaza okwesibhakabhaka, enye ibhaqa obomvu, enye ibhaqa eluhlaza. Umbala wobumfama wenzeka xa uhlobo olunye lwekhowuni lusilela.
Xa ukukhanya kubetha iintonga kunye neekhowuni, iimpembelelo zentliziyo ziveliswa. Impembelelo ihambela iindidi ezimbini zee-neurons: kuqala ukuya iiseli zebipolar kwaye emva koko uye ku iiseli zemigulukudu . Ii-axon zeeseli ze-ganglionic zenza i luvo optic .
Iimbilini ze-optic zithwala impembelelo ngqo kwingqondo. Phantse izigidi ezili-150 zeentonga zikwi-retina, kodwa kuphela sisigidi esinye seeseli ze-ganglionic kunye neentsinga zemithambo-luvo ezikhoyo, oko kuthetha ukuba uninzi lweentonga zinokuvuselelwa kunokuba kukho iiseli kunye nemithambo-luvo yokuthwala iimpembelelo. Iliso lakho malidibanise imiyalezo ngaphambi kokuba idluliselwe engqondweni.
Umxholo ochukumisayo: Ukuchukumisa
Ulusu luqukethe ii-receptors ngokubanzi. Ezi receptors zinokubona ukubamba, iintlungu, uxinzelelo kunye nobushushu. Lonke ulusu lwakho, unazo zone ezi zinto zifunyenwe ngaphakathi. Ii-receptors zesikhumba zivelisa impembelelo xa ivuliwe, eqhutywa kwintambo yomqolo emva koko iye kwingqondo.
Ulusu ayisiyiyo kuphela izicwili emzimbeni ezinokufumana ii-receptors, nangona kunjalo. Amalungu akho enziwe ngezicwili, nawo anee-receptors. Amalungu, iigaments, kunye neetoni ziqulethe Abamkeli , efumanisa ukuma nokuhamba kwamalungu.
g 13 ipilisi emhlophe
Olona nyango lonyango olulungileyo lweposti
indlela yokongeza amanqaku kwipowerpoint
ukunciphisa amayeza okubhalwa komzimba
Unyango lwe-sinus tachycardia